မီ (ရုပ်ရှင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗစ်တိုရီးယား ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး
၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ (မြန်မာနိုင်ငံ)
မြန်မာဘာသာ ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ
မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ဒါရိုက်တာ ဏကြီး ရိုက်ကူးပြီး ဗစ်တိုရီးယား ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး မှ ဖြန့်ချီမည် ဖြစ်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာမကြီး ကြည်အေး၏ မီ ဝတ္ထုကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ကာ ပိုင်ဖြိုးသု၊ နေတိုး၊ ရဲအောင်၊ မင်းဦး၊ သားညီ၊ အောင်ရဲထိုက်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာတွင် ရုံတင်ပြသမည် ဖြစ်သည်။
၂ အဓိက ဇာတ်ကောင်များ
မီ ဝတ္ထုကို ပိုင်ဖြိုးသုက ဝယ်ယူခဲ့ကာ သူမ၏ ဗစ်တိုရီးယားရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေးမှ စီစဉ်ရိုက်ကူးခြင်း ဖြစ်ပြီး ဗစ်တိုရီးယားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၏ ဒုတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်သည်။ ရိုက်ကူးရေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလလယ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။
မီ အဖြစ် ပိုင်ဖြိုးသု
သော်ဆွေ အဖြစ် နေတိုး
မောင်ကိုလေး အဖြစ် အောင်ရဲထိုက်
ဦးတင်မောင် အဖြစ် မင်းဦး
ဦးဘချစ် အဖြစ် ရဲအောင်
ရွှေဓားမြှောင် အဖြစ် သားကြီး
ကျန်းမာရေးသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံထားရသော ပိုင်ဖြိုးသုက မီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ဆေးလိပ်သောက်သည့်ပုံဖြင့် သရုပ်ဆောင်ထားသလို ရုပ်ရှင်ပိုစတာတွင်လည်း ဆေးလိပ်သောက်နေသောပုံကြောင့် လူမှုကွန်ယက်တွင် ဝေဖန်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရုံးတွင် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
↑ "စာရေးဆရာမကြီး ကြည်အေး၏ နာမည်ကျော်ဝတ္ထု "မီ" ကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ် ဒီဇင်ဘာလယ်ပိုင်းတွင် စတင်ရိုက်ကူးမည်" (၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇). Daily Eleven News. Retrieved on ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ယုဖြူဟန် (၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၈)။ “မီ” ဇာတ်ရုပ်အတွက် ရင်ခုန်နေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု။ ဧရာဝတီ။ ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ပန်းမြတ်ဇော် (၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇)။ စာရေးဆရာမ ကြည်အေး ၏ “ မီ ” ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖြစ် ပုံဖော်ရိုက်ကူး။ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန။ ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ သူဇာလင်း (၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈)။ ဆေးလိပ်သောက်သည့်ကိစ္စ အကယ်ဒမီ ပိုင်ဖြိုးသု ရှင်းလင်း (ရုပ်သံ)။ ဒီဗွီဘီ။ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကျော့ကေခိုင် (၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈)။ “မီ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သော စီးကရက်သောက်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိဟု ဆို။ မဇ္ဈိမ။ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဇွဲဉာဏ် (၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈)။ ‘မီ’နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု။ 7Day။ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဇာနည်မောင် (၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈)။ မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဝေဖန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုနှင့် မီဒီယာများတွေ့ဆုံ။ Myanmar Digital News။ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်ရှိ မီ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မီ_(ရုပ်ရှင်)&oldid=640282" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။